Mayelana Nathi - Molooco
Siyakwamukela ku-MOLOOCO. Usanda kuthola ifayela le- omkhulu kunabo bonke isitolo esiku-inthanethi iningi lezidingo zakho. Dlulisa amehlo kuwebhusayithi yethu futhi uhlale ubukele imithombo yezokuxhumana yethu ukuthola amathuba amahle esaphulelo. Sihlala sigcina imikhiqizo yokwenza impilo yakho ibe ngcono kakhulu.
UMOLOOCO uneminyaka engu-8 inkampani yezitolo eku-inthanethi ekhonza abantu kwimikhiqizo ehlukahlukene yezimboni. IMOLOOCO inkampani ezimele ngokuphelele ngakho ukwethembeka kwethu kungokwamakhasimende ethu kuphela, senza konke okusemandleni ethu ukusebenzela ngokuphelele amakhasimende ethu.Sikholelwa ukuthi ukwethembana phakathi kwethu kubaluleke kakhulu.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana neMOLOOCO nganoma yisiphi isikhathi! Siyakuthanda futhi siyabonga ngokuba yingxenye ye- MOLOOCO!